मिस टिन सिन्धुली २०७४ को विजेता : आयुस्मा थापा
नारीले केइ गरेनन भन्छन सबै खैइत गर्न देको। उमेर नपुग्दै बिहे गरेर पठौउने अनि कसरी गर्छन
अवसर पाए नारीले पनि समाजमा केही गर्न सक्छे भन्ने मुल नाराको साथ मिस टीन सिन्धुली २०७४ शनिवार सिन्धुली पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न भएकोछ । जिल्लामै पहिलो पटक आयोजना भएको मिस टीन कार्यक्रमले नारीले केइ गरेनन भन्छन सबै खैइत गर्न देको। उमेर नपुग्दै बिहे गरेर पठौउने अनि कसरी गर्छन । हो अब हाम्रो समजमा यस्तो नहोस नारी ले नि केइ गर्न पाउन पर्छ। अब सिन्धुली बाट अनुराधा कोइराला जन्मीनु पर्छ भनेरनै यस्तो किसिमको ट्यालेन्ट शोको आयोजना गरेको कार्यक्रमका संयोजक प्रिन्सराजले बताए । उनले यस भन्दा अगाडी सिन्धुली आइडलको समेत सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेका थिए भने यस पछाडी मिस्टर सिन्धुली समेत आयोजना गर्ने जानकारी दिए ।
२४ जना प्रतिस्पर्धी रहेको मिस टिन सिन्धुली २०७४ को उपाधि आयुस्मा थापाले हातपारेकी हुन । सिद्धस्थली बोर्डिगमा कक्षा ९ मा अध्यनरत थापा स्वर्गी पिता अजय थापा र निलम थापाकी छोरी हुन । मिस टिन उपाधि हातपारे संगै थापाले हाम्रो समाजमा दैनिक जसो महिला माथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि आफु डटेर लाग्ने उनले बताइन ।
हाम्रो प्रयास नेपाल सिन्धुलीका अध्यक्ष गंगा दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रुपमा सिद्धबाबा स्कुलका राजेश मास्के, नं. ९ बाहिनी अड्डाका साहायक बाहिनी पति हरेन्द्र पाठक थिए भने निर्णायकमा चर्चित गाएक मिलन सुर्खेति रहेको थिए । मिस टिन सिन्धुली २०७४ को उपाधि विजेतालाई नगद रु. २५ हजार रुपैया थियो भने नगद रु. १५ हजार पछिल्लो समय जिल्लामा समाजसेवामा सकृय उज्ज्वल विक्रम थापाले मिलानो फुटवयरको तर्फबाट दिनु भएको थियो । यसै गरी फस्ट रनर अप मा सुजीता खड्का र सेकेण्ड रनरअप मा समिक्षा राई हुन सफल भएका थिए ।